War Xaqiiq Ah: Antonio Conte iyo Manchester United oo Bilaabay Wadahadalo Cusub oo Bilow ah | Dalkaan.com
Home ciyaaraha War Xaqiiq Ah: Antonio Conte iyo Manchester United oo Bilaabay Wadahadalo Cusub...
War Xaqiiq Ah: Antonio Conte iyo Manchester United oo Bilaabay Wadahadalo Cusub oo Bilow ah
Manchester United ayaa la soo xiriirtay Antonio Conte markii ugu horeysay iyadoo macalinka reer Talyaani uu muujiyay rabitaan uu ku doonayo inuu qabto shaqada Old Trafford, sida ay wararku sheegayaan.
Red Devils ayaa sii waday qaab ciyaareedkeedaa liitay xilli ciyaareedkan kadib markii ay guuldaro 5-0 ah kala kulmeen Liverpool axadii, iyadoo cadaadiska uu haatan kor ugu sii kacayo tababare Ole Gunnar Solskjaer .
Halka madaxda United ay si xoogan u taageereen Macalinka Norwegian-ka, iyagoo qandaraas cusub u saxiixay xagaaga, lakin wax qabadyadii dhawaa ayaa keenay in guddiga kooxda ay qiimeeyaan dookhyadooda.
Solskjaer ayaa wali la filayaa in uu hogaamiyo saddexda kulan ee soo socda – ee ay la ciyaarayaan Tottenham , Atalanta iyo Manchester City – laakiin fasaxa caalamiga ah ee soo socda ayaa keenaya wakhti ku haboon oo lagu badali karo tababaraha hadii ay natiijooyinku horumari waayaan.
United ayaa diyaarisay liis afar magac ah oo ay ku fikirayaan hadii shaqada ka caydhiyaan Solskjaer, iyadoo Brendan Rodgers, Zinedine Zidane iyo tababaraha Ajax Erik ten Hag ay dhamaantood ku jiraan liiskooda.
Laakiin tababarihii hore ee Chelsea iyo Inter Conte ayaa ah bartilmaameedkooda 1-aad, weriyaha Sky Sport Italia ee Gianluca Di Marzio ayaa sheegay in dhex dhexaadiyayaal ka socda United ay durba la xiriireen tababaraha reer Talyaani isagoo Macalinka soo Dhaweeyay arintaasi.
Previous articleMowqifka GALMUDUG iyo wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka GURICEEL
Next articleWararkii ugu dambeeyey ee dagaalka Guriceel, halka la kala joogo iyo ciidan gaaray
Daawo: Ole Gunnar Solskjaer oo isagoo ilmeenaya fariin u diray ciyaartoyda...